पिण्ड खाने बेलाको समाजसेवा – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
पिण्ड खाने बेलाको समाजसेवा
२०७१ बैशाख ४, बिहीबार ०५:२२ गते
नेपालमा यस्तो टेन्सन, यस्तो भ्रष्टाचार, जताततै कोलाहल, ढुक्कसँग बाँच्न नसक्ने अवस्था, कुनै पनि शीर्षकमा चित्त बुझ्दो अवस्था नभएको देशमा जसले जति नेपालीको सरदर आयु तोके पनि अबको दिनमा ६० वर्ष वाँच्न सक्नु भनेको अहो भाग्यको विषय बन्ने बाला छ । सबै खाले परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा निष्कर्ष यस्तै निस्किन्छ । अब ६० वर्ष बाँच्न मुश्किल हुने भएपछि ८० र ९० वर्षका मान्छेहरुबारे के चर्चा गर्नु, जसलाई आउने दिनमा नेपालमा भेट्न दुर्लभ हुने पक्का छ । कुरा ८२ वर्षका बुढासँग सरोकार राख्छ ।
हिजो आज जो–जो बुढाबुढी ८० वर्ष कटेका छन् तिनीहरुको जीवन असाध्यै टिठ लाग्दो देखिन्छ । कोही आँखा देख्दैनन् । कोही कान सुन्दैनन् । कोही घुँडोमुन्टो जोडेर ¥याल सिँगान बगाएर ओछ्यानमा पल्टिएका छन् । कोही लठ्ठीको सहारामा भान्छा, ओछ्यान र आँगनसम्म आफ्नो मक्किएको शरीरलाई लतारिरहेका छन् । कुल मिलाएर बुढाबुढी भएकाहरुको जीवन दुःखै–दुःखले भरिएको छ । तर चितवनको भरतपुरमा स्थायी बसोवास भएका ८२ वर्षे बुढा विष्ट बिहान–बिहानै मर्निड्ड वाकमा निस्किन्छन् । ठमठमी हिँड्छन्मात्रै होइन, उस्तैपरे कँुद्छन् पनि । आँखा तेजिला छन् । कान औधी टाठा । आवाज धोद्रो भएपनि, नक्कली दाँतले काम चलाए पनि उनको बोली प्रष्ट छ । होचो–होचो, भुन्टे–भुन्टे पाराको ज्यान छ तिनको । चर्चा लायक रोग छैन । रसिला र हँसिला छन् । ठट्टा गर्न खुब मन पर्छ तिनलाई । ठट्टा पनि ज्ञानबद्र्धक हुन्छ तिनको । लीलाराज हो उनको नाम ।
लिलाराज विष्ट पञ्चायतकालीन राजनीतिज्ञ हुन् । उनी झण्डै तीस वर्ष शासनमा रहे । राजा महेन्द्रको विश्वास जितेर सधैँ कुनै न कुनै राजनीतिक पद हातपार्ने लीलाराज पटक–पटक मन्त्री भए । कीर्तिनिधी विष्ट, सूर्यबहादुर थापा, डा. तुलसी गिरी, नवराज सुवदीहरुसँग राजनीतिक सहयात्रीको रुपमा रहेका यिनले नेपालको पूरै जिल्ला घुमे । नेपालको कुन ठाउँ कस्तो छ यिनलाई प्रायः सबै जानकारी छ । यिनी शासनमा छँदा पोखरा कालान्तरमा भासिन सक्छ, मानववस्ती विस्तार गर्न नहुने निष्कर्ष निकालिएको थियो । तर, पछिल्ला शासकहरुले त्यो विषयलाई बेवास्ता गरेको बताउने यिनले चितवनको महत्व नेपालको हकमा उच्च रहेको बताउने गरेका छन् ।
राजा महेन्द्रको त विश्वासपात्र थिए नै यिनी, राजा वीरेन्द्रको पनि उत्तिकै विश्वास पात्र बने । राजा वीरेन्द्रले औधी मन पराएका लीलाराज पटक–पटक मन्त्री भए । वीरेन्द्रको “एक्का” भएर शासनमा रहेका यिनी शक्तिशाली मध्येका एकको रुपमा गनिन्थे । कुल मिलाएर शासन अनुभवका हिसाबले मुलुक बुझेका यिनको राजनीति २०४६ सालपछि समाप्त भयो । बहुदलीय प्रजातन्त्र भन्न थालिएपछि यिनी राजनीतिबाट पाखा लागे । यिनको भनाइ यतिबेला अरु केही छैन, एउटा मात्रै छ–‘मुलुक सबै कोणबाट कमजोर भएको छ, शासन जुनसुकै पार्टीले गरुन्, मुलुक सधैँ बलियो रहनुपर्छ’, यस्तो विचार राख्ने विष्ट हिजोआज अलि खिन्नजस्ता देखिन्छन् । यिनले नेपालको सर्वोच्च अदालत जहाँ २५ वटासम्म न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ आज त्यहाँ सिर्फ पाँचओटा न्यायाधीश रहेका छन् । हजारौं मुद्दा अलपत्र परेका छन् । यो देख्दा यिनले दिक्क मानेका छन् ।
यिनीहरु शासनमा छँदा नेपालमा दलीय स्वतन्त्रता बाहेक अरु सबैथोक थियो । अहिले दलीय स्वतन्त्रता छ अरु केही बाँकी रहेन । सबै अस्तव्यस्त भयो । हाम्रा लागि ज्यादै मह¤व राख्ने छिमेकी मुलुक भारतमा राजदूत नभएको वर्षौं बितिसकेको छ । भारतलगायत झण्डै डेढदर्जन मुलुकमा राजदूत नभएको अवस्था छ । यो तरिकाले नेपाल विश्वबाट अलग्गिन लागि सक्दा पनि कसैलाई सुर्ता लागेन । देशभित्रकै अरु संवैधानिक निकायको कुरा गर्दा अझै लाज लाग्ने अवस्था छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्तहरु भर्ना गरिएको छैन । लोकसेवा आयोगको हालत उस्तै छ । निर्वाचन आयोगमा आयुक्तहरु पूरा गरिएको छैन । सिड्डो मुलुक लंगडोको हिँडाइको तरिकाले लड्खडाएर हिँडेको छर्लड्ड देखिन्छ । मुलुकको यस्तो दुर्दशा देख्दा यी पुराना वृद्ध राजनीतिज्ञ असाध्यै दुःखी भएका छन् । उनको थप एउटा गुनासो पनि छ “मुलुकलाई अघि बढाउन दलहरुबीच राष्ट्रिय साझा मुद्दामा एकता हुनुपथ्र्यो त्यो भएन” ।
यसरी यी विष्टबाले मुलुकको हितमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । बुढेसकालमा मिठो मसिनो खाएर आरामदायी जीवन बाँचेर मर्ने ईच्छा राख्छन् धेरै मान्छेहरु । तर, यिनको हकमा त्यस्तो देखिएन । यिनले शासनभन्दा बाहिर बस्दा पनि सक्रिय रुपले मुलुक हितमा चिन्तन गरिरहे । यो उनको सकारात्मक र श्रद्धालायक कर्म हो । यतिमात्र होइन यो उमेरमा समेत यिनले अन्य नागरिकहरुले अनुकरण गर्न लायक काम भर्खरमात्रै गरेका छन् । त्यो काम हो विनास्वार्थको चर्चा लायक समाजसेवा ।
चितवनको सिद्धि गाविसमा बसोबास गर्ने अति गरिब चेपाड्ड परिवारको एक महिलाले पाँचओटा लालाबाला छाडेर बेपत्ता भएपछि र त्यो परिवार खाना खानबाट समेत विचल्लीमा परेको समाचार पढेपछि यी वृद्ध राजनीतिज्ञले त्यही ठाउँमा गएर कम्तिमा दुई महिना पुग्ने खाद्यान्न र लत्ताकपडा वितरण गरे । सुन्न र पढ्नलाई त्यो समाचार चितवन र आसपासका जिल्लाका थुप्रै–थुप्रै धनी धनाढ्यहरुले सुने, पढे तर कसैको मन पलाएन । त्यो दुःखद् समाचारले अति कम मान्छेको मन पगाल्न सक्यो । ती अतिकम दिलदार मान्छेमध्ये ८२ वर्षे वृद्ध लीलाराजको मन दुख्यो । यिनले दुःखी परिवारलाई सक्दो सहयोग गर्ने विचार गरे । उनको योजनामा पत्रकार नवराज ढकाल र प्रकाशमणि ज्ञवालीले सहयोग गरे । चेपाड्ड परिवारसम्म सहयोग सामाग्रीसहित पु¥याउन मद्दत गरे । सहयोग विशुद्ध सहयोगमात्रै थियो । त्यहाँ कुनै स्वार्थ थिएन ।
भोलिका दिनमा आफूलाई पनि मर्दापर्दा सहयोग पाइएला भन्ने सोचका साथ सहयोग गरिएको हो भनौँ भने पनि खान र लाउनबाटै बञ्चित चेपाड्ड परिवारले विष्टलाई कहिले भेट्लान् र सहयोग गर्लान् ? विष्टले गरेका सहयोगमा ठूलो रकम खर्च भएको होइन, सिर्फ भावनाको मात्रै कुरा यहाँ देखिन्छ जुन भावनामा पवित्रता देखिन्छ । फेरि सहयोग गर्ने तरिकाबारे चर्चा गर्दा पनि धेरैलाई अनौठो लाग्न सक्छ । शुद्ध भावनाले सहयोग गर्नु एउटा पक्ष हो त्यसमाथि ८२ वर्षे बुढा भरतपुरबाट त्यति टाढा सिद्धिसम्म पुग्नुलाई भने मामुली मान्न सकिन्न । सायद अरुको हकमा हुँदो हो त सहयोग गर्न राजी भएकै खण्डमा पनि त्यो उमेरको मान्छे त्यति टाढा जाने थिएनन् पनि होला । कुरा नियतमा जोडिएको छ ।
विष्टको स्पष्ट भनाइ छ “सक्नेले नसक्नेलाई, दुःख परेको बेला सहयोग गर्नुपर्छ । राजनीति, जात, क्षेत्र, संस्कृति, पदआदि कुरालाई प्राथमिकता दिनुहुन्न” । हुन पनि हो, विचारकै हकमा कसैको विचार कसैसँग मिल्दैन । तर मिल्न पर्ने विषय भनेको मानवताको विषय हो । यो शीर्षकमा कसैको कसैसँग मत भिन्नता हुनु हुँदैन । किनभने मानव शरीर पाएर पहिले मानवकै जस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ त्यो व्यवहार हो “सेवा र सहयोग” । लीलाराजले भन्ने गरेका छन् “अब कति पो बाँच्छु होला र जति बाँच्छु, बाँचुन्जेल आफूभन्दा कमजोरको सेवा गरेर विदा हुन्छु” । सत्य यही हो ।
८२ वर्षे वृद्ध शरीर कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ । लिलाराज विष्ट मर्नलाई लाइनमा उभिएका छन् । पछिल्लो होइन अघिल्लो लाइनमै उभिएका छन् । त्यो मक्किएको शरीरभित्रको मुटु थाक्यो होला । मृगौला थाकिसकेका होलान् । अन्य–अन्य अंगहरु पनि कोही थाकेका होलान्, कोही थाक्ने अवस्थामा पुगेका होलान् । कुनै संवेदनशील एउटा अंग थाक्ने बित्तिकै उनको फोटोसहित हार्दिक समवेदना छापिने छ । त्यही दिनमा पत्रपत्रिकाहरुको कुनाकाप्चामा शीर्षक समाचार लेखिने छ “भूतपूर्व मन्त्री लिलाराज विष्टको ह्दयघातका कारण मृत्यु” । सत्य यही हो आज ८२ वर्षको उमेरमा पनि उनी नेपाली र नेपालको हित चिताएर बाँचिरहेका छन् । कोही पदमा पुग्ला नपुग्ला, कोही धनी होलान् कोही गरिब । जो जे होस् उसले जुनसुकै उमेरमा पनि सेवाको भावनालाई अँगाली रहनुपर्छ भन्ने लीलाराज विष्टको हेर्दा र सुन्दा सामान्य लाग्ने चेपाड्ड परिवारलाई उनले गरेको सहयोगबाट शिक्षा लिन सकिन्छ ।
त्यसकारण निष्कर्षमा यो भन्न सकिन्छ मान्छे शरीरले बुढो हुन सक्ला तर आत्माविश्वास जगाउने हो भने जीवनलाई सुखद बनाउन सकिन्छ जसरी लीलाराज विष्टले बनाइरहेका छन् । शरीरले बृद्ध देखिएकाहरुले लीलाराज विष्टको व्यवहारिक चिन्तनलाई पछ्याउन सकुन्, आफू बाँच्न अरुलाई पनि बचाउनुपर्छ भन्ने सन्देशलाई आत्मसात् गर्न सकून् । शुद्ध भावनाले बाँच्न चाहना राख्ने लीलाराज विष्ट अझै लामो समय बाँचून्, बाँचेर सहयोगको आवश्यकता हुनेहरुलाई सबै खालको सहयोग गर्न सकून् । पूर्वमन्त्री लीलाराजको पिण्डखाने बेलाको कमजोर मान्छेहरुमाथिको सहयोगबाट अरुले पनि सहयोगी बन्नुपर्छ भन्ने शिक्षा लिँदै जाउन् । विष्टबाको दीर्घ जीवनका लागि हार्दिक शुभकामना ।